0 Saturday November 17, 2018 - 19:09:46
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weeraro hor leh oo ciidamada shisheeyaha AMISOM lagula beegsaday gobollada Banaadir iyo Shabeellaha Hoose.
0 Saturday November 17, 2018 - 12:10:22
Warar soo baxay ayaa sheegaya in laxiray mid kamida saraakiishii ugu sarraysay ciidamada Melleteriga Itoobiya kana mid ahaa saraakiisha Xabashida ee awaamirta siisa maamullada dabadhilifyada ah ee ka jira dlaka Soomaaliya.
0 Saturday November 17, 2018 - 12:01:12
Wargeyska Washington Post oo soo xiganaya mas'uuliyiin katirsan Sirdoonka Mareykanka ayaa daabacay in Max'med Bin Salmaan uu ahaa Ninka soo agaasimay qorshahii lagu dilay Saxafi mucaarad ah.
0 Saturday November 17, 2018 - 10:55:38
Ugu yaraan hal askari oo katirsan ciidamada shisheeye ee duullaanka ku jooga Soomaaliya ayaa la xaqiijiyay in uu ku dhintay weerar gaadma ah oo ka dhacay Muqdisho
0 Saturday November 17, 2018 - 10:32:19
Dhammaan degmooyinka iyo deegaannada wilaayada islaamiga ah ee dhaca Koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya waxaa maanta ka billaawday howllaha Zaka qeybinta xoolaha nool.
0 Saturday November 17, 2018 - 10:18:58
Xoogaga Al Shabaab ayaa markale weerar khasaara dhaliyay ku qaaday ciidamo katirsan maamulka isku magacaabay Puntland ee kajira gobollada waqooyi Bari.
0 Friday November 16, 2018 - 09:39:42
Wararka naga soo gaaraya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in saaka dagaal xooggan uu ka qarxay deegaanka Golangolle oo qiyaastii 80km u jira degmada Guriceel.
0 Thursday November 15, 2018 - 19:58:20
Markii ugu horraysay dowladda Sacuudiga ayaa xaqiijisay in si ulakac ah loo dilay Wariye Jamaal Khaashuqji oo ahaa saxafi mucaarad Sacuudiyaan ah oo lagu dilay magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga.
0 Wednesday November 14, 2018 - 21:23:18
Wararka ka imaanaya gobolka Baay ayaa sheegaya in weerar khasaara badan dhaliyay markale lala beegsaday ciidamo katirsan dowladda Xabashida Itoobiya ee gobolkaasi xoogga ku jooga.
0 Wednesday November 14, 2018 - 20:50:54
Golaha ammaanka ee QM ayaa si aqlabiyad leh isugu raacay in la qaado cunaqabateyntii saarneyd Eriteria sagaalkii sano ee la soo dhaafay.
0 Wednesday November 14, 2018 - 11:33:05
Khasaara dhimasho iyo dhaawac leh ayaa ka dhashay rasaas gudaha magaalada Boosaaso laga maqlay saacadihii lasoo dhaafay.
0 Wednesday November 14, 2018 - 11:01:20
0 Wednesday November 14, 2018 - 08:48:23
Idaacadda Islaamiga Andalus ayaa faafisay wareysi laga duubay mid kamida raggii fuliyay weerarkii khasaaraha badan dhaliyay ee Hotel Saxafi.
0 Tuesday November 13, 2018 - 19:07:06
Tobanaan qof ayaa ku dhintay iska hor'imaadyo markale dib uga qarxay xuduud beenaadyada ah wadaagaan wadamada Itoobiya iyo Kenya.
0 Tuesday November 13, 2018 - 10:47:27
Madaxweynaha "DFS" Maxamad Cabdullaahi Maxamad (Farmaajo) ayaa mudadii uu safarka ku joogay dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Amxaarada ee Gonder ka qeyb galay dhoola tus ay Haraha iyo Wabiyada ku sameynayeen ciidamo Xabashi ah oo loo diyaariyay iney ka hawl galaan saldhigga Milatari ee ay Itoobiya…
0 Monday November 12, 2018 - 20:04:03
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya magaalada Marka ee xarunta Sh/Hoose qarax xooggan ayaa lagu beegsaday ciidamo katirsan dowladda Federaalka.
0 Monday November 12, 2018 - 18:40:41
0 Monday November 12, 2018 - 13:07:16
Wararka ka imaanay magaalada Baraawe ee gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in dablay hubeysan ay fal kufsi ah kula kaceen mid kamida dumarka magaaladaasi kunool.
0 Monday November 12, 2018 - 08:38:08
Xoogag hubeysan ayaa gudaha magaalada Muqdisho ku dilay sarkaal sare oo katirsanaa ilaalada madaxtooyada dowladda Federaalka Soomaaliya.
0 Monday November 12, 2018 - 08:10:59
Khasaara lixaad leh ayaa ciidamada Xabashida Itoobiya kasoo gaaray weeraro hor leh oo lagula beegsaday deegaan katirsan gobolka Baay ee dhaca Koonfurta Soomaaliya.
0 Sunday November 11, 2018 - 19:09:47
Sheekh Yuusuf Sheekh Ciise Kaba Ku Dukade oo ah Waaliya Wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelaha Dhexe ayaa Idaacadda Diiniga ah ee Al-furqaan siiyay wareysi muhim ah oo ku saabsan xaaladda guud ee gobolka, weeraradii ugu dambeeyay iyo arrimo kale.
0 Sunday November 11, 2018 - 14:30:31
Xukun xadu-liwaad ah ayaa barqanimadii maanta ka dhacay degaanka Shaaw oo dhaca galbeedka gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya,Boqollaal dad weyne ah ayaana isugu soo baxay fagaaraha si ay u dhageystaan xukunka iyo habka loo fulinayo.
0 Sunday November 11, 2018 - 12:08:48
Deegaannada Muungi iyo Boorow oo dhaca xeebta Shabeellaha hoose, una dhexeeya Baraawe iyo Marko ayaa waxaa gaaray dhakhaatiir ka socotay hay'adda kheyriga ee Al-Ixsaan.
0 Sunday November 11, 2018 - 11:30:44
« Prev12345678 ... 268Next »